Zombie-Raacayaasha: Dhimashadu Waxay Ku Socdaan Adduunyada Suuqaynta Saameynta | Martech Zone
Khamiista, Oktoobar 29, 2020 Isniin, Janaayo 18, 2021 Harleen Dorka
Waxaad la kulantaa astaanta warbaahinta bulshada oo ka sarreysa celceliska tirada raacsan, kumanaan jecel, iyo khibrad shuraako hore - trick ama daaweyn?
Iyada oo tirada ololeyaasha suuqgeynta saameynta leh sii wadista sii socoshada, maahan wax aan caadi ahayn in magacyadu ay ku dhacaan khiyaanada xisaabaadkaas oo ay la socdaan kuwa raacsan oo been abuur ah iyo dhagaystayaal aan sax ahayn.
Sida laga soo xigtay Suuqgeynta Iibiyaha:
Suuq-geynta suuqa waxaa lagu wadaa inuu koro ilaa $ 9.7B sanadka 2020.
300% ka badan saamileyda yar-yar waxaa isticmaala shirkadaha waaweyn marka loo eego sanadkii 2016.
Ku dhowaad 90% dhammaan ololayaasha saameynta leh waxaa ka mid ah Instagram iyada oo qayb ka ah isku darka suuqgeynta.
Khiyaanada saamaynta ayaa sii kordheysa walwalka ay qabaan jawaab bixiyaasha iyadoo in ka badan 2/3 jawaab bixiyaasha ay soo mareen.
Taasi maaha in la yiraahdo dhammaan saamileyda saamileyda waxay ku dhacaan qaybtaan. Xaqiiqdii, tufaaxa xun ayaa yar oo aad uyar waxaana aad uga tiro badan kuwa daacadda ah oo gebi ahaanba lagu kalsoon yahay.
Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in si sax ah loo fahmo sida loo doorto saameyn-bixiye leh dhammaan ujeedooyinka ugu fiican adiga iyo sumaddaada.
Hadda, ma isku dayeyno inaan ka cabsanno qof kasta oo ka fog suuq-geynta saamaynta. Xaqiiqda ka soo horjeedda run ahaantii. Iyo helitaanka caawimaadda wakaaladda suuq-geynta saamaynta waxay ka caawin kartaa noocyada inay helaan raad-raac leh dhagaystayaal dhab ah oo dhab ah oo gacan ka geysan doona abuuritaanka soo-celin la yaab leh oo ku saabsan maalgashiga.
Warbaahinta bulshada waa mid ka mid ah warbaahinta kaliya ee soo martay koror aan lala tartami karin bilihii la soo dhaafay. Suuqge kasta ayaa arki kara in waxqabadka xayeysiinta ee barta internetka uu u baahan yahay inuu ka mid noqdo istiraatiijiyadda astaanta horay u socota. Iyo iskaashi saamayn leh waa mid ka mid ah taatikada ugu wax ku oolka badan uguna dabiiciga ah ee loo adeegsado in lagu sameeyo taas.
Amelia Neate, Maareeye Sare Isku-duwaha Saameynta
Amelia khalad ma ahan. Xaqiiqdii, suuqgeynta saameyntu waa habka ugu dhakhsaha badan ee soo koraya ee habka helitaanka macaamiisha, oo leh 22% ee suuqleyda ayaa sidoo kale ku calaamadeeya midka ugu kharashka badan.
Natiijo ahaan 67% ee suuqleyda noocyada kaladuwan ee kaladuwan ayaa isku diyaarinaya inay kordhiyaan kharashaadka suuq geynta ay ku qarash gareeyaan 12ka bilood ee soo socda.
Laakiin, maaddaama magacyadu ay bilaabayaan inay la socdaan dhaqdhaqaaqa saameynta leh, Amelia waxay sharraxeysaa sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo ololaha suuqgeynta saameynta leh, iyadoo la hubinayo inay tahay sida ugu macquulsan uguna macquulsan.
Cabsida Raacayaasha Raaciga ah
Kuwa raaca been abuurka iyo hogaamiyaasha dhintay waxay ku yimaadaan qaabab badan. Sida la ogyahay, kuwa raacsan ee la iibsaday waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, taas oo shakhsiyaadku ka boodaan shaqada adag ee ku lug leh kor u qaadista warbaahinta bulshada, iyo taas bedelkeeda, ay bixiyaan kuwa raacsan been abuurka si ay uga dhigaan koontadooda inay ka weynaato sida dhabta ah.
In kasta oo tani ay noqonayso wax ay cambaareeyaan dadka isticmaala iyo astaamaha, haddii aan la helin mooyee, way adkaan kartaa in la kala sooco tirada dhabta ah ee raacsan iyo mid been abuur ah.
Nooc kale oo raacayaal been abuur ah ayaa ah koonto aan shaqeyn muddo dheer, ha ahaato sababta oo ah shakhsigu wuu ilaaway, mar dambe ma doonayo inuu isticmaalo laakiin ma uusan tirtirin astaanta, ama haddii kale.
Laakiin iyadoo aan loo eegin sababta, koonto aan firfircooneyn ayaa si xun u saameyn karta qiimeynta kaqeybgalka.
Tilmaamida sida ay waxyeello ugu yeelan karto noocyada, daraasad ayaa lagu ogaaday inay jiri karaan inta la mid ah 95 million Bots iyagoo iska dhigaya inay yihiin taageerayaal been abuur ah oo ku jira barta Instagram oo keliya, taasoo ku kallifaysa ganacsiyada $ 1.3 bilyan oo ah dhimashooyin dhintay iyo khasaare.
Si loola dagaallamo saameynta xun ee ay tani ku leedahay astaan, ka faa'iideysiga khibradda hay'adda suuqgeynta wax ku oolka ah waxay gacan ka geysan kartaa in maskaxda la nasiyo oo la hubiyo in ololaha uu gaari doono kumanaan, haddii aysan ahaan lahayn malaayiin taageerayaal aad ugu hawlan.
Waxaa jiray dhowr kiis sanadihii la soo dhaafay halkaas oo shakhsiyaad leh xaalad saameyn ku leh lagu helay dambi ah inay iibsadeen kuwa raacsan oo been abuur ah si loo wanaajiyo fikradaha awooddooda iyo caan ku ahaanta goobaha.
Tusaale ahaan, Bake Off's Paul Hollywood wuxuu isku arkay fadeexad raacayaal raacsan markii uu ka nastay Twitter ka dib markii tiridiisa raacday ay hoos u dhacday ka dib markii barta xiriirka bulshada ay ka saareyso akoonnada been abuurka ah barxadda.
Daraasadaha kale waxay muujinayaan heer aad u sarreeya boqolkiiba raaca been abuur loogu talagalay saamileyaasha caanka ah, sida Kourtney Kardashian iyo kuwa kale oo saameyn ku leh warbaahinta bulshada.
Waa lambar uun dhamaadka maalinta, sax? Laakiin illaa iyo inta ay calaamaduhu ka welwelsan yihiin, tani waa inay dejiso dhawaaqyada qaylada. Markay summaddu soo saarayso olole saamayn leh, waxay sidaa ku yeelaan iyagoo ka duulaya aragtida ah in astaantoodu gaari doonto dhagaystayaal ballaadhan - iyo mid ku hawlan taas. Saameeyayaashu waxay ku soo oogi karaan lacag aad u tiro badan hal boosteejo, marka magacyadu waxay u baahan yihiin inay hubiyaan in soo noqoshada, tusaale ahaan, gaadhista ama soo-gaadhista ay helayaan, ay tahay mid aad u tiro badan oo ku sababayn karta kharashka.
Amelia Neate, Maareeyaha Sare ee hay'adda suuq geynta saamaynta adduunka, Isku-duwaha Saameynta
Marka, Maxay Tahay In Astaamaha Ay Sameeyaan
Amelia waxay sharraxeysaa inay jiraan dhowr waxyaalood oo ay tahay in la eego marka lala shaqeynayo saamileey.
Engagement - Halkii aad diiradda saari lahayd tirinta raacsaneyaasha, muhiimad weyn sii qiimeynta hawlgelinta. In kasta oo cabbirka dhagaystayaasha ee ololahaagu gaadhayaa laga yaabaa inuu kayaryahay, kuwa uu gaadho waxay u badan tahay inay la falgalaan. Taasina waa sida aad ku gaari doontid natiijooyin oo aad la kulmi doonto ujeedooyinkaaga suuq-geynta.
Saameynta Micro-Influencers - Saameeyayaasha yar-yar waxay u muuqdaan inay leeyihiin qiimeyn kaqeybgal badan. In kasta oo aysan weyneyn, dhagaystayaashoodu guud ahaan waa kuwo isdhexgal badan oo sax ah sidaa darteedna, waxay caddeyn karaan inay aad uga qiimo badan yihiin noocyada.
jecel yahay - In kasta oo ay jiraan qalabyo meesha ka jira oo lagu hubinayo qiimeynta kaqeybgalka, waxaad ku wadi kartaa cilmi-baaristaada adoo isbarbardhigaya tirooyinka raacsan ee tirada waxyaabaha ay jecel yihiin qoraalladu qoraalladu helaan.
Comments - Haddii aadan weli hubin sharcinimada saamaynta, faallooyinka ayaa ah qodob kale oo sheegaya. Hubi in, marka hore, ay helayaan wax faallooyin ah iyo marka labaad, haddii ay jiraan qaabab ama wax u eg waxyaabo la mid ah oo iyaga ku jira. Tusaale ahaan, faallooyinka ka soo baxa waxa u muuqda adeegsadayaal kala duwan, laakiin dhammaantood isku wada akhriya, waxay u badan tahay inay yihiin bots
Haddii kale, waxaad ka codsan kartaa caawimaad hay'ad ololayaashaada. Sidoo kale aaladaha iyo aragtida warshadaha, wakaaladuhu waxay marin u heli karaan xog aad u tiro badan si ay ugu caawiyaan magacyada guusha ololahooda. Wakaaladaha suuq geynta saamileyda waxay sida caadiga ah dhisaan oo kobciyaan xiriiro adag oo lala yeesho kuwa wax gala, kuwaas oo ay ogyihiin inay leeyihiin raacitaan dhab ah iyo qiimeyn hawlgal.
Marka, ka hor intaadan garaacin albaabada astaamaha warbaahinta bulshada si looga caawiyo ololahaaga soo socda ee wax-ku-oolka ah, hubso in maalgashigaaga lala kulmi doono daaweyn ee uusan ahayn khiyaanooyin. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah:
Booqo Iskuxiraha Saameynta
Tags: Amelia quruxsanka qayb qaadashada saamayntakhayaanada saamayntasuuqgeynta suuqgeyntaIsuduwaha saamayntaKourtney kardashiansaamaynta makromicro-saameyn-yarePaul hollywood
Harleen Dorka waa qoraa qibrad u leh qormooyinka oo si gaar ah diirada u saaraya mowduucyada la xiriira hababka isgaarsiinta iyo isticmaalka dhijitaalka ah. Waxay leedahay aragti gaar ah oo loogu talagalay fikradaha hoggaamineed ee fikirka iyo fikradaha nolosha erayga iyadoo la abuurayo qaabab habeysan oo cilmi-baaris ah oo ku saabsan noocyo kala duwan oo warshado ah oo ay ku jiraan: suuqgeynta iyo warbaahinta bulshada, is-beddelka macaamiisha, hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda, tafaariiqda iyo sumcadda oo lagu daray kuwo kale oo badan qaybaha.
Hor: Hel Aragti Wadaag ah Isgaadhsiinta Iibintaada